Sweden Bahnhof ISP ပာာ Wikileaks ရဲ့Dell Server တစ္လံုုး ကိုု USD$ 3.3K နဲ ့EBay က ေန ေရာင္းခ်ခဲ ့
Sweden Bahnhof ISP ပာ Wikileaks ရဲ့Dell Server တစ်လုံး ကို USD$ 3.3K နဲ ့EBay က နေ ရောင်းချခဲ ့
Wikikeaks ပာ 2010 မှာ အီရတ် နဲ ့အာဖဂန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ ့တဲ ့စစ် အကြောင်း နဲ ့ပတ်သက်တဲ့လျှို ့ဝှက်သတင်း တွေ ကို ဖော်ထုတ် ရင်းနဲ ့ကြီးပြင်းလာတဲ ့အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုပါ။ Wikileaks ပာ သူ ့Data တွေ သိမ်းဆည်းထားတဲ့Dell Server တစ်လုံးကို ကန်ဒေါ်လာ ၃၃၀ဝ၀နဲ ့ရောင်းချခံခဲ ့ရပါတယ်။
Wikileaks ပာ သူ့Server တွေကို Sweden မှာ ရှိတဲ့Sweden မှာရှိတဲ့Bahnhof Internet Service Provider မှာ 2010 မှာ ကစပြီး Hosting လုပ်ထားခဲ ့ပါတယ်။ အခုရောင်းထုတ်ခဲ ့တဲ့Server ကိုလဲ Bahnhof က Ebay က နေ တဆင့်ရောင်းချခဲ ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bahnhof ရဲ ့CEO က Server ထဲမှာ ရှိတဲ ့Data တွေကို Maximum security 35 pass sanitize နည်းနဲ့ဖျက်ထားပါတယ်လို ့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနည်း ပာ Hardware သို ့မပာုတ် Software ကိုသုံးပြီ းData တွေကို ပြန်ပြီး Recover ပြန်လုပ်လို ့ရမှာ မပာုတ်ပါဘူး ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူက ဝယ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို ့ပာ ဝယ်သူ ကို ဒီ Server ပာ Wkieaks ရဲ ့Server အစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ Wkilieaks ရဲ ့Founder ဖြစ်တဲ ့Julian Assange ရဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ ့စာချုပ်နဲ ့လတ်မှတ်ကိုလဲ ပြနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းလို ့ရတဲ ့ပိုက်ဆံထဲက တဝက်ကို အွန်လိုင်း Privacy အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ ့အစည်းဖြစ်တဲ ့5th of July Foundation နဲ ့RSF အဖွဲ့တစ်တို ့ကို တဝက်စီ လှူ သွားမယ်လို ့ပြောပါတယ်။ RSF ဆိုတာ Reporters without boders ဆိုတဲ ့အဖွဲ ့ပါ။ မြန်မာလို ပြန်ရင်တော ့နယ်နိမိတ် မရှိ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်သတင်းအဖွဲ ့ပါ။ သူတို ့တွေ ပာ အင်တာနက် လွတ်လပ်မှုနဲ ့လှုပ်ရှားတဲ ့အဖွဲ ့တွေပါ။
ဒီရောင်းချမှုနဲ ့ပတ်သတ်ပြီး Bahnhof ပာ Wikileaks ရဲ ့ခွင် ့ပြုချက် မတောင်းခဲ့ပါဘူး လို ့Wikileaks က Twitter မှာ ပြောထားပါတယ်။ Bahnhof က Wikileaks ရဲ ့အဓိကဖြစ်တဲ ့Web Server ကို ရောင်းလိုက်တာလို ့ပြောကြားထားပေမဲ့Wkileaks ပာ မပာုတ်ပါဘူးလို ့ငြင်းထားပြီးတော့Bahnhof လိုပဲSweden ISP တစ်ခုဖြစ်တဲ ့PRQ နဲ ့တစ်ခြားနိုင်ငံကISP တွေကိုလဲ သုံးတယ်လို ့ပြောထားပါတယ်။ Bahnhof ကို Wikileaks ရဲ ့Cablegate အနေနဲ ့သုံးခဲ ့တာမပာုတ်ပါဘူး။ အီရတ်စစ်ပွဲရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သိမ်းဖို့သက်သက်ပါ။ ကျွန်တော်တို ့ပာ RSF လို အဖွဲ ့အစည်းကို ကူညီပါတယ်။ သို ့ပေမဲ ့Bahnhof လို သူ ့ဈေးကွက်မှာ နာမည်ရဖို ့ဒီလို လုပ်တာကိုတော ့ကျွန်တော်တို့့မကြိုက်ပါဘူး လို ့Wikileaks က ပြောကြားသွားပါတယ်။
အော်…ဒါနဲ ့အဲဒီစစ်သတင်းတွေကို Wikileaks ကိုပေးတဲ့အမေရိကန် စစ်သည်တော် Chelsea Manning ပာ အရင်လကပဲ ထောင်ဒဏ် ၃၅ ချခံလိုက်ရပါတယ်။
Ref : RT News
Pls support us by givingaLIKE or SHARE if you like our posts. Thanks.
– U C Thu
Credit Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427447307375203&set=a.416028538517080.1073741826.414611495325451&type=1&relevant_count=1